မလေးလည်း ခရီးတိုလေးတွေ သွားဖြစ်တယ်။ မလေးကို အလည်သွားတာ icity ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကြီးဆိုလို့ သွားကြည့်တာ၊ ဘာမှတော့ သိပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့တိုနိူင်ငံရဲ့ အိုင်ဒီယာကိုတော့ အရမ်းချီးကျူးမိတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ဘာမှမရှိဘူး။ ရောင်စုံမီးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ။ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ရောင်စုံမီးလေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်သွားတာ။ ဖယောင်းရုပ်ထုတွေ လည်းရှိတယ် ဒါပေမယ့်ဈေးကြီးတယ်။ ကားပါကင်ကလည်း တစ်နာရီကို မလေးငွေ ၁၀ ပေးရတယ်။ icity ကညဖက်သွားမှလှတာ။ မီးရောင်ကို အလှဆင်ထားတာမို့လို့ ညဖက်နဲ့ ပနံရလှတယ်။
icity ရဲ့ ရောင်စုံမီးလှလှလေးတွေ
icity ရဲ. snowwalk
Genting highlands သူကတော့ အင်ဒိုး ၊ အောက်ဒိုး ပြင်ဆင်နေလို့ တစ်ချို့ နေရာတွေ ပိတ်ထားတယ်။ နေရာစုံတောင် မရောက်ခဲ့ရဘူး။
Labels: ခရီးသွား အမှတ်တရ
မလေး တစ်ယောက် ဘလောဂ်.ကနေ ဝေးကွာသွားတာ တော်တော်ကိုကြာနေပါပြီ။ အလုပ်မအားတာရယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်. မရေးဖြစ်ဘူး။ ဘလောဂ်. ကချစ်သောသူငယ်ချင်းတွေရဲ. စာတွေတောင်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ မလေးရဲ.ဘလောဂ်.မှာ comment ရေးပေးတဲ.ချစ်သော မိတ်ဆွေများကိုချက်ချင်း အကြောင်းမပြန်ဖြစ်လို. တောင်းပန်ရင်း မလေးကိုခွှင်.လွှတ် ပေးပါနော်။ မလေးဘလောဂ်.လေးကို လာလည်ပေးလို. ကျေးဇူးတင်ပါတ.ယ်။မရေးဖြစ်တာကြာ ပြီဖြစ်တဲ.သားပိုင် အကြောင်းလေးတွေ မလေးရေးပါအုံးမယ်။